मंगल ग्रहमा पानीको ताल भेटियो, अब चाँडै मानव बस्ति बस्ने – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/मंगल ग्रहमा पानीको ताल भेटियो, अब चाँडै मानव बस्ति बस्ने
एजेन्सी । अनुसन्धानकर्ताहरूले मङ्गल ग्रहमा तरल अवस्थामा पानी विद्यमान रहेको प्रमाण फेला पारेका छन् । उनीहरूले फेला पारेर प्रस्ताव गरेको जलाशय सो ग्रहको दक्षिणी ध्रुवमा अवस्थित हिमवत् क्षेत्रमुनि रहेको छ र त्यो झन्डै २० किलोमिटर चौडा छ । यसअघि गरिएका खोज अनुसन्धानहरूले मङ्गल ग्रहको सतहमा कहिलेकाहीँ मात्र अस्थायी रूपमा पानी बगेको हुनसक्ने देखाएका थिए । तर स्थायी रूपमा नै तरल अवस्थामा पानी फेला परेको देखाउने यो पहिलो प्रमाण हो ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
वैज्ञानिकहरुले धेरै लामोसमयदेखि मंगल ग्रहमा पानीको खोजी गरिरहेका थिए । र आज मंगल ग्रहमा पानी भेटिएको छ । यो खोजीले वैज्ञानिकहरुलाई एउटा सफलता मिलेको छ । यसैको आधारमा आकलन गर्न सकिन्छ कि जाहाँ पानी भेटिएको छ त्याहाँ कुनै न कुनै जीवित प्राणीको बसाई हुनेछ । त्यसकालागी पानी भेटिएको मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बस्ने सम्भावना देखिएको छ । मानव बस्ती बसाउने विषयमा भने वैज्ञानिकहरुले अझैं अनुसन्धान गर्न बाँकि नै छ ।
यसअघि नासाको क्युरिओसिटी रोभर भनिने अन्तरिक्ष वाहनले पुराना र सुख्खा तालहरूका पिँधको अन्वेषण गर्दा त्यहाँ पहिला पानी रहेको पत्ता लागेको थियो । तर पातलो वायुमण्डल भएकाले सो ग्रह चिस्सिएको छ र पानी हिउँ भएर जमेको छ । फेला परेको भनिएको ताल मङ्गल ग्रहको दक्षिणी ध्रुवमा हिउँमुनि रहेको छ । मङ्गल ग्रहको परिक्रमा गरिरहेको ुमार्स एक्स्प्रेसु नामक भूउपग्रहमा जडित मार्सिस नाम गरेको रेडार उपकरणको प्रयोग गरेर यो पछिल्लो तथ्य पत्ता लगाइएको हो ।
यो अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका इटालियन न्याश्नल इन्स्टिट्युट फर एस्ट्रोफिजिक्सका प्रा. रोबर्टो ओरोसेई भन्छन्,ूसम्भवतः यो त्यति विशाल ताल हैन। मार्सिसले त्यस्तो तालमा पानीको गहिराइ निर्क्योल गर्न नसके पनि अनुसन्धान टोलीले त्यो कम्तीमा पनि एक मिटर जति हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यी महिला पाइलट, जसले गरिन् १० हजार जनासँग सहवास !
यस्तो हुन्छ करोडपति हुनेहरुको जन्मकुण्डली, तपाईको कस्तो छ ?
कर्फ्यूकाबीच नाइटक्लबमा पार्टी ! प्रहरी पुगेपछि भएको भागाभागमा १३ जनाको निधन, समातिएकाहरुमा पनि कोरोना पुष्टि